सोच्नै नसक्ने गरी फेरि घट्यो सुनको मुल्य कति पुग्यो हेर्नुहोस ? – Sandesh Press
August 17, 2021 105
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा स्थिरता आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनचाँदीको मूल्य गत आइतबारकै मूल्य कायम हुँदै सुनप्रतितोला ९१ हजार ५०० र चाँदी प्रतितोला एक हजार ३२५ नै कायम भएको हो ।गत शुक्रबार बजारमा सुन
प्रतितोला ९१ हजार३०० रुपैयाँ र चाँदी एक हजार ३१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनकोमूल्यसमेतगतआइतबारकै कायम हुँदै प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक
गर्नुहोला***काठमाडौं–चिकित्सा शिक्षा आयोगले शनिबार राति नर्सिङ र फार्माको स्नातक तहको लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परिक्षाफल प्रकाशित ग¥यो । जसमा १३ सय ८० जना नर्सले व्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) अध्ययनको लागि नाम निकाले । १३ सय ८० जनामध्ये पहिलो नम्बरमा नाम निस्कियो स्याङजा अर्जुनपोखरी–३ की भोजकुमारी शर्माको । उनले २ सय पुर्णांकमा १ सय ५६
नम्बर ल्याइन् । पूरा हुनासाथ उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक वर्ष करारमा जागिर गरिन । करारमा काम गरिरहेका बेला संगीताले लोकसेवा पनि तयारी गरिरहेकी थिइन् । संयोगबस लोकसेवा पनि खुल्यो । लोकसेवा खुलेसँगै उनले आवेदन दिइन । पढाइमा अब्बल उनले नाम ननिकाल्ने कुरै थिएन । २० वर्षको उमेरमै उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन । ‘पहिलो पटक लोकसेवा दिएकी थिएँ त्यही बेला नाम निस्कियो,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले मेहनत पनि गरेकी थिएँ
Nextसोच्नै नसक्ने गरी फेरि घट्यो सुनको मुल्य कति पुग्यो हेर्नुहोस ?
टिपरको ठ’क्करले एकै परिवारका तीन जना’को मृ’त्यु, गाउँ नै शो’कमा डुब्यो
आज देशको धेरै जसो ठाउँमा भारी वर्षा हुने, यी नदीमा आउन सक्छ बाढी ? (सुचिसहित)